के लेखौं प्रेमका बारे !!! - Everest Talk
के लेखौं प्रेमका बारे !!!1 min read
प्रेम कुनै बन्धन हैन । प्रेमको कुनै नियम वा कानुन हुँदैन । न प्रेमको जात नै हुन्छ र यसको प्रकार पनि हुँदैन । प्रेमलाई बन्धन बनाउनेहरू प्रेमी पनि हैनन् ।
२०७६, १ फाल्गुन बिहीबार ०९:२२
in एभरेष्ट टक विशेष, ब्लग, मुख्य समाचार
प्रेम बाँच्नुको एकमात्र बहाना हो । आदर्श हो । त्याग हो । सम्बन्ध हो । इतिहास हो । वर्तमान हो । र हो भविष्य पनि ।
सम्बन्धमा प्रेमको ठाउँ नहुन पनि सक्छ । आदर्शमा प्रेम खोक्रो भइदिनसक्छ । त्याग घृणाले पनि गर्न सकिन्छ । इतिहास, वर्तमान र भविष्य पनि प्रेमहीन हुनसक्छन् । तर प्रेममा सम्बन्ध अवश्य हुन्छ, भलै त्यो सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न नसकियोस् ।
प्रेममा आदर्श हुन्छ, प्रेम त्यही आदर्शले बाँच्छ । आदर्श बिनाको प्रेम कहाँ प्रेम कहलाउछ र ? त्याग बिनाको प्रेम झन के प्रेम ?
हो, मान्छे मर्छ | प्रेम इतिहास बनेर पनि बाँचिरहन्छ, वर्तमान बनेर जिउन सिकाउछ र भविष्य बनेर बाँच्ने उत्प्रेरणा दिन्छ ।
हामी प्रेमलाई सागरसँग तुलना गर्छौँ । यस अर्थमा कि प्रेम सागरजस्तै चोखो र निश्चल हुन्छ । तर प्रेम हावाजस्तो हो । हामी हावा स्वयंलाई देख्न सक्दैनौँ । तर हावाले ल्याएको क्रियाकलापहरूको अवलोक गर्नसक्छौँ ।
प्रेम र हावाको प्रकृति पनि उस्तै हुन्छ । कहिले हावाहुण्डरी बनेर आउँछ, र पर्यावरणलाई विकृत बनाएर जान्छ । प्रेमले पनि कहिले जीवन विकृत बनाइदिन्छ । फेरि हावाबिनाको पर्यावरण र प्रेमबिनाका जीवन, दुवै कल्पनाभन्दा बाहिरका कुरा हुन ।
प्रेम तपस्या पनि हो । कथित प्रेमहरू भ्रम हुन । प्रेमको उदाहरण हुँदैन । प्रेमको परिभाषा हुँदैन । र प्रेमको आकार पनि हुँदैन । उदाहरण नभएका चीजहरूको तुलना गर्न सकिदैन । परिभाषा बिनाको वस्तुलाई शब्दमा कैद गर्न सकिदैन । बिना आकारमा आकृतीहरूलाई देख्न सकिदैन, देखाउन सकिदैन ।
प्रेमलाई कुनै शुत्रमा बाध्न सकिदैन, प्रेमको कुनै हद पनि हुँदैन, यसको नाप गर्ने कुनै एकाई पनि छैन, न त यसको शुरु छ, न यस्को कुनै अन्त्य नै ।
प्रेम भनेको जीवन हो, यदि आमालाई पेटको बच्चाप्रति प्रेम नहुँदो हो त, जीवन कहाँ रहन्थ्यो ? जीवन कुनै नियमले चल्दैन । यसर्थ प्रेमको पनि कुनै नियम हुँदैन ।
कथित जातपातहरू समाजको बन्धन, मूल्यमान्यता, नियमको परिधिमा कैद बनेर सिर्जना गरिएका भ्रम हुन । तर प्रेम शास्वतः छ । यदि समाजिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चिएर प्रेम निभाउन सकिँदैन भने त्यसलाई प्रेमको उपमा के काम ?
प्रेमको परिधी हुँदैन, परिमिती हुँदैन, न हुन्छ आयतन, न हुन्छ क्षेत्रफल । प्रेम अज्यामितिय छ । यसको कुनै आकार हुँदैन, प्रकार हुँदैन । प्रेम त अनुभव हो, महसुस हो ।
प्रेम झूटो हुँदैन । न साँचो नै हुन्छ । कि त प्रेम नै हुँदैन, हुन्छ त केवल प्रेम हुन्छ । झूटा त प्रेमीहरू हुन्छन् । साँचा पनि प्रेमीहरू नै । प्रेम त सिर्फ प्रेममात्र हुन्छ । प्रेमलाई साँचो वा झूटोको मतलब पनि हुँदैन । साँचो र झूटोको मतलब त कथित प्रेम गर्नेहरूलाई हुन्छ ।
प्रेममा दूरी हुँदैन । प्रेमको कुनै प्रकृति पनि हुँदैन । प्रेममा कुनै स्वार्थ हुँदैन । न त प्रेममा कुनै अपेक्षा हुन्छ । प्रेममा दूरी हुन्थ्यो त प्रदेशिएको छोरो घर सम्झेर फर्किएन थिएन । प्रेमको कुनै प्रकृति हुन्थ्यो त वसन्तको कुनै तुक हुने थिएन । प्रेममा स्वार्थको स्थान हुन्थ्यो त बाबुले मजस्ता नालायक छोरोहरूलाई आफ्नो एकाधिकारी मान्ने थिएनन् । प्रेममा कुनै अपेक्षा हुन्थ्यो त कुनै कविले आफ्नो बिछोडिएकी प्रेमको नाममा कविता कोर्ने थिएन ।
जिन्दगी र प्रेम उस्तै हुन् । न जिन्दगी योजनाले चल्छ न त प्रेम नै । प्रेम गरेर गरिने कुरा पनि हैन । प्रेम त स्वतः हुने कुरा हो । जसरी सूर्यको तापमा हिउँ स्वतः पानी बनेर बग्ने गर्छ, त्यस्तै प्रेम पनि स्वतः प्रेमको तापमा प्रेम बनेर बग्छ ।
प्रेमको अर्थ विवाह हैन । प्रेमले न कुनै सम्बन्धको इच्छा नै राख्छ । प्रेम कुनै सम्बन्ध पनि हैन । प्रेमको कुनै सम्बोधन पनि हुँदैन । प्रेमले जीवनसँग कुनै माने पनि राख्दैन । प्रेमको आयु पनि त हुँदैन । आयु त प्रेम गर्नेहरूको हुन्छ । प्रेम त अनन्त छ । अमर छ ।
अँ….. प्रेम त सिर्फ त्यो मात्र हो, जुन कथित प्रेम गर्नेहरूको परिभाषाको सीमनाभन्दा बाहिर कतै आफ्नो अस्तित्व कायम गर्छ ।
यी मैले लेखेका कुनै पनि शब्दहरू प्रेम हैनन् । प्रेम त अपरिभाषित छ । प्रेमलाई परिभाषित गर्नु मेरो क्षमताको कुरा पनि हैन । कसैको क्षमताको कुरो पनि हैन ।
यतिचाहिँ बुझ्नू, प्रेम त्यो हो जुन अहिलेसम्म कसैले शब्दमा उतार्न सकेको छैन |
हो, मैले प्रेम महसुस गरेको छु, लेख्न सकेको छैन ।
Tags: कृष्ण ढुङ्गेलप्रेम